Iindaba-Intshayelelo kwi-chlorine dioxide
I-Chlorine dioxide (ClO2) yirhasi etyheli-luhlaza kunye nevumba elifana neklorine esasaza ngokugqwesileyo, ukungena kunye namandla okucoca ngenxa yendalo. Nangona i-chlorine dioxide ine-chlorine egameni layo, iipropathi zayo zahluke kakhulu, kufana necarbon dioxide eyahlukileyo kuneye-carbon element. I-klorine dioxide iye yamkelwa njengesibulala-ntsholongwane ukususela ekuqaleni kweminyaka yoo-1900 kwaye samkelwe yi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo yase-US (i-EPA) kunye ne-US Food and Drug Administration (FDA) kwizicelo ezininzi. Kubonakalisiwe ukuba kuyasebenza njenge-spectrum ebanzi, anti-inflammatory, bactericidal, fungicidal, kunye ne-virucidal agent, kunye ne-deodorizer, kwaye iyakwazi ukwenza i-beta-lactams kunye nokutshabalalisa iipinworms kunye namaqanda azo.
Nangona i-chlorine dioxide ine "chlorine" egameni layo, i-chemistry yayo ihluke ngokupheleleyo kwi-chlorine. Xa usabela kunye nezinye izinto, bubuthathaka kwaye bukhetha ngakumbi, buvumela ukuba isebenze ngokuchanekileyo nangokusebenzayo. Umzekelo, awusebenzi nge ammonia okanye uninzi lweekhompawundi eziphilayo. I-klorine dioxide iyayidibanisa imveliso kunokuba iyichole, ngenxa yoko ngokungafaniyo ne-chlorine, i-chlorine dioxide ayizukuvelisa izinto ezingafunekiyo zendalo ezine-chlorine. I-chlorine dioxide ikwayirhasi eluhlaza-eluhlaza ebonakalayo evumela ukuba ilinganiswe ngexesha lokwenyani ngezixhobo zeefotometric.
I-chlorine dioxide isetyenziswa ngokubanzi njenge-antimicrobial kwaye njengearhente ye-oxidizing emanzini okusela, inkqubo yeenkukhu, amachibi okudada kunye namalungiselelo okuhlamba umlomo. Isetyenziselwa ukucoceka iziqhamo kunye nemifuno kunye nezixhobo zokulungisa ukutya kunye nokusela kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwiilebhu zophando lwesayensi. Ikwaqeshwe nakwicandelo lokhathalelo lwempilo ukuze kungcoliswe amagumbi, iipassthroughs, ikheswa kwaye ikwacocise inzalo yemveliso kunye neyokubulala iintsholongwane. Kukwasetyenziswa ngokubanzi ukwenza iblitshi, ukukhupha ityhefu, kunye nokukhupha iintlobo ngeentlobo zemathiriyeli, kubandakanya iselulosi, iphepha-pulp, umgubo, ulusu, amafutha kunye neoyile kunye namalaphu.